Ndekupi Apple Kubhadhara kuSpain? | IPhone nhau
IPad nhau | | Apple Pay, iPad, iPhone
About yekupfuura equator yegore uye isu hatisati tambo na Apple Pay muSpain. Chinhu chakaipisisa hachisi chekuti haisati iripo, asi kuti haina kana kutarisirwa. Aive Tim Cook iye amene gore rapfuura akazivisa kusvika kweApple yekubhadhara sevhisi munyika medu, asi Iko kuora moyo kwakapihwa capital apo muApple Keynote yekupedzisira umo iOS 10 yakaunzwa, nyika dzinotevera idzo Apple Pay yaizotangwa dzakaziviswa uye yedu yanga isiri pakati pavo. Ko Apple Pay muSpain? Ndeapi matambudziko ari kunonoka kuvhurwa kwayo munyika medu?
1 Zvivakwa zvatovepo
2 Mabhangi anogona kunge ari akamedura
3 Mabhangi anogadzirira yavo mbozhanhare yekubhadhara system
4 Kunonoka, asi kuchauya
Spain ndeimwe yenyika dzine zviteshi zvakanyanya zvinowirirana ne «zvisingabatanidzwe» kubhadhara. Ndicho chete chinodiwa cheApple Pay kuti isvike nyika, zvirinani maererano nehurongwa hwezvivakwa. Vatengesi havafanirwe kuisa mari munzvimbo nyowani dzekubhadhara kuti vakwanise kugamuchira Apple Pay, chinova chinhu chakakosha kwazvo chinobatsira. Iwe unongofanirwa kusvika pazvibvumirano nemabhangi uye vanopa makadhi eApple Pay kuti vatange, saka zvinoita sekunge dambudziko riripo.
Mabhangi anogona kunge ari akamedura
Kana isu tikabhadhara chigadzirwa muchitoro, mapato mazhinji anofarira anobatanidzwa. Kune rimwe divi, mupi wekadhi redu, kuwedzera kubhangi redu, uye zvakare bhangi rechitoro iro rinowanzo kuve iro rinopa iyo yekupedzisira yekubhadhara. UyeZviri nyore kunzwisisa kuti iwo akawanda matunhu, macommissions mazhinji, uye neApple iri panjodzi, isu tinofanirwa kuwedzera chikamu icho Apple chainoda kutora kubva mubhizinesi.. Izvi zvinogona kuve mavambo ematambudziko eApple Pay muSpain.
Asi nei Santander achigamuchira Apple Kubhadhara kuUK uye kwete kuSpain? Mamiriro ezvinhu ekubhadhara makadhi muUnited Kingdom akasiyana neaya ari kuSpain. Izvo zvinoitika muUnited States uko kune gumi nemaviri emabhangi anotambira Apple Pay. Masosi padyo nemabhangi anoziva mamiriro ebhizinesi anotaura nezve mamiriro akanaka kwazvo kumabhangi, asingade chero munhu kuti auye kuzotora keke ravo.
Mabhangi anogadzirira yavo mbozhanhare yekubhadhara system
Zviripachena kubhadharwa kwenhare nderemangwana (iro riripo munzvimbo zhinji kare), uye mabhanga anozviziva. Ndosaka vauya pamwe chete kuti vagadzire yavo mbozhanhare yekubhadhara system, yakazvimiririra kune iyo yakatsanangurwa nemamwe mahofori akadai seApple, Google, Samsung, nezvimwe. Zita reiyo yakasarudzika system ndeyeBizum, uye yatove nerutsigiro rwezvinhu zvakaita seSandander, CaixaBank, BBVA, Yakakurumbira, BMN, Bankia, Bankinter, pakati pevamwe..
Iyi nhare yekubhadhara nhare haifanire kuve chinokanganisa vamwe vatambi vatsva kupinda mumutambo, uye kune izvi kune CNMC (National Commission of Markets and Competition), iyo inofanirwa kuona kuti hapana hupombwe kana mamiriro ehukuru hwezvimwe zvinhu mu pamberi pevamwe, asi Isu tatoziva mashandiro anoita zvinhu kana kubhengi kuchitaurwa munyika medu.
Kunonoka, asi kuchauya
Kumhara kwevakuru nemabhadhariro avo enhare kunozopedzisira kwauya, icho chinhu icho vashoma vanokahadzika, asi kuti mabhanga makuru achatanga kuda kuyedza kutonga misika yose inogoneka zvakare ichokwadi. Samsung Pay yatosvika, asi kubva paruoko rweimwechete chinhu uye nekugamuchirwa kushoma nevashandisi. Apple Pay uye Android Pay ichasvika, netariro gore risati rapera zvirinani. Zvichakadaro isu ticharamba tichimirira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Ndekupi Apple Kubhadhara kuSpain?
Kwemavhiki ini pandinopinda iCloud kubva kubhurawuza mushure mekubvisa makuki, rubatsiro rwekuda kweICloud kana Apple Pay inoonekwa pazasi. Saka kusvika kwake kunogona kunge kusiri kure zvakadaro
Panguva iyo yainoda kusvika mune mamiriro ichave isisashandiswe kuti ishandiswe mu iphone 6, hapana chimwe chandinoda kunze kwekufaira kirasi yekuita mhosva yekutsausa kushambadza.
Ichokwadi chaizvo kuti vanofanirwa kumhan'arirwa kubiridzira sezvo ivo vachikutengesera timu nechimwe chinhu chausingazive kana uchinacho sezvo chisingashande kana kuti haugone kuti chishande zvakasununguka, uye zvese nekuti ivo vanoda kuisa yavo mhino mune zvese, ngatirambei tichivapa vidilla uye nekubhadhara izvo zvavanobhadharisa kamera yakanaka ine foni.
Apple inogona kutaurirana nezve kutenga Tidal